Njirimara, ahịhịa na anụmanụ nke Osimiri Aegean | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke Osimiri Aegean
Oké Osimiri Aegean abụghị ihe ọzọ karịa ogwe aka nke na-esi n'Oké Osimiri Mediterenian abịa. Ọ bụ ezie na Osimiri Mediterenian buru ibu ma nwee nnukwu mkpa, oké osimiri aegean O nwere nnukwu ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme na ọ bụ otu n'ime oke osimiri nke ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme si gburugburu ụwa mara. N’isiokwu a anyị ga-egosi gị ụdị njirimara nile nke oke osimiri a na ihe kpatara ọ jiri bụrụ nke ama ama.
You chọrọ ịmụ ihe niile gbasara Osimiri Aegean?
2 Uwa na oke osimiri
3 Nhazi nke Oké Osimiri Aegean
4 Di iche-iche di iche-iche
5 Isi egwu
Oke Osimiri Aegean bụ ebe enwere ụdị akụkọ ihe mere eme dị iche iche. Site na ịgagharị na nyocha nke obodo dị iche iche dị ka Minoan na Mycenaean dị ka ọnụnọ nke ọtụtụ agha. A na-ekwu na oké osimiri a bụ mmalite nke nnukwu mmepeanya ọ bụ ezie na ọ bụghị kpamkpam.
Oké Osimiri Aegean dị n’agbata Gris na Turkey ma ọ bụ nanị otu ogwe aka nke Oké Osimiri Mediterenian. N'ime oke osimiri a, enwere ihe dịka obere agwaetiti 2.000 na ụfọdụ ndị buru ibu nke dị na Gris ugbu a. N'ime agwaetiti a kacha mara amara anyị na-ahụ Lesbos, Crete, Rhodes, Santorini, Mykonos, Leros, Euboea na Samos.
Oke osimiri ahụ pere mpe na mgbago ugwu, ma obosara ya na-ebu ibu ka ọ na-erute Osimiri Mediterenian. A maara ya otu a maka ịdị adị nke ahịhịa na anụmanụ dị iche ugbu a na agwaetiti ndị a kpọtụrụ aha. Agwaetiti ndị ọzọ a ma ama na ndịda bụ Rhodes, Karpathos, Cases, Kythera, Krit na Antikythera.
Ọ bụ ebe mara mma ịga ezumike n’ihi na ọ nwere ọtụtụ ọnụ mmiri na ọdụ mmiri zuru oke maka igwu mmiri na nlegharị anya na-enweghị oke oke ifufe. Ha nwekwara ọtụtụ gulfs n'ihi ịdị adị nke ọtụtụ agwaetiti na mpaghara dị otu obere. Gburugburu ya dị ihe dịka square kilomita 214.000. Ogologo kachasị bụ 700 km. Akụkụ ya kachasị obosara dị ihe dịka kilomita 440 n’obosara.
N'agbanyeghị ihe ị nwere ike iche na obere ya, ọ dị omimi. N'ime ya, edere ihe omimi karịrị mita 2.500 n'okpuru oke osimiri nke ụdị ụdị abis na-ebi n'ime ya. A na-achọta ihe omimi ya n'àgwàetiti Krit nke ogologo ya dị mita 3.500.
Uwa na oke osimiri
Osimiri Aegean nwere mmiri dị iche iche dị iche iche nwere njirimara dị iche iche. Na nke mbụ anyị na-ahụ akwa oyi akwa dịkarịa ala mita 50 nke anyị nwere okpomọkụ n'oge ọkọchị nke ihe dịka ogo 21-26. Uzo nke abuo bu uzo di nkpa na omimi nke ruru ihe ruru 300 mita na ogo ya di gburugburu 11-18 degrees. N'ikpeazụ, akwa ọzọ dị omimi nke gbatịrị site na 300 mita ruo omimi na, n'ime ya, ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti 13 na 14 ogo.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ oke osimiri na-ekpo ọkụ n’ozuzu ya. N'ihi ọtụtụ agwaetiti na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ọ bụla n'ime ha, e kewara Oké Osimiri Aegean n'ime obere osimiri atọ dị obere. Ihe yiri ihe mere na Spen na Osimiri Alboran. Osimiri nta bụ Krit, Thrace na Myrtos, nke ọ bụla kwekọrọ n'àgwàetiti gbara ya gburugburu. Oké osimiri a na-eriju mmiri site n'ọtụtụ mmiri, nke anyị na-ahụ Maritsa, Mesta, Estrimón na Vardar.
Nhazi nke Oké Osimiri Aegean
Mayfọdụ nwere ike ịna-eche etu otu esi eji ụdị aka a wee pụta n’Oké Osimiri Mediterenian. Nke a emeela n'ihi na nnukwu ala na-agbadata na omimi ruo mgbe ọ kpatara nkụda mmụọ nke na-ebute mmiri dị iche iche. Ala nke oke osimiri a nwere otutu mkpọda na mkpọda n'ihi ịda mba nke ihe mmegharị kpatara efere tectonics.
N'akụkụ ụfọdụ nke ụwa, tectonics efere na-arụsi ọrụ ike karịa n'akụkụ ndị ọzọ. Karịsịa na ebe a na-etinye aka na n'akụkụ. Mgbe omumu ihe obula enwere ike ichoputa na oke osimiri a ka di obere na o gha aputa mgbe usoro nke eriri. Ala ahụ malitere ịgbanwe na mpaghara nke ugwu na ụfọdụ ebe na ịda mba na ndị ọzọ na-emepe. Nke a bụ otú e si guzobe ihe enyemaka dịgasị iche iche nke ala Oké Osimiri Aegean.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịhụ ka ala ọma jijiji na-awakpo ala mmiri a Ihe mgbawa ugwu ịnọ na mpaghara ebe ọrụ dị elu.
Di iche-iche di iche-iche
Oké osimiri a, ọ bụ ezie na ọ pere mpe, jupụtara na ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. E nwere ọtụtụ ụdị anụmanụ na ahịhịa dị ebe ahụ. Osisi na fauna na-emetụta Oké Osimiri Mediterenian. N'etiti ụdị anyị hụrụ na anyị nwere ike ịhụ:
Sperm whales (Igwe macrocephalus)
Oké Osimiri Mediterenian akàrà (Monachus monachus)
Ugbo ala (phocoena phocoena)
Nwekwara ike ịchọta ụfọdụ ụdị invertebrates dị ka decapods, crustaceans na mollusks. Maka akụkụ ya, algae dị oke mkpa n'oké osimiri a ebe ọ bụ na ọtụtụ ahịhịa mmiri jupụtara. N'ihi na teren dị okwute, mpaghara a ọ bụghị ụba dị ka Caribbean, mana enwere ike ịmịnye ya. E nwere ọtụtụ ndị na-azọrọ na ha agaala ebe abụọ ahụ ma ọ bụghị ndịiche dị ukwuu. Osisi oliv na-eto n’elu ala dị ka ọ na-eme na Andalusia.
N’ezie, aka mmadu no n’oké osimiri a. Ọ bụghị n’ihi na ọ bụ oke osimiri mara mma ma pere mpe ka ọ ga - esi kpofu nje mmadụ. Maka imerime mmiri na oke osimiri mmetọ bụ nsogbu dị egwu gburugburu ebe obibi nke nwere ike igbu osisi na ahịhịa yana ya, oru nile nke aku na uba na nrigbu nke puru idi adi.
Offọdụ ebe obibi kachasị mkpa nke ụdị anụmanụ na osisi ndị a na-emebi emebi site na ahịhịa na-aga n'ihu na-awụfu. Ihe a nile akpalitela ikike nke ikpochapu ọtutu umu anumanu bi na ya.
Ewezuga mmetọ site na nfufu, mkpọtụ ndị ụgbọ mmiri na-eme na-agbanwe ma gbanwee ndụ ndị na-eri anụ na ụgbọ mmiri na-enwekarị nsogbu.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị ga-amatakwu banyere Osimiri Aegean.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Oke Osimiri Aegean
Kpakpando na mbara igwe